Megaupload ကိုပိတ်ပါ Linux မှ
တီနာတိုလီဒို | | GNU / Linux များ, NOTICIAS
ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်များသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မရှိတော့သော၎င်းဆိုဒ်ကိုပိတ်ပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ လူခုနစ်ယောက်နှင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် "ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အကြီးအကျယ်ခိုးကူးမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဟုစွပ်စွဲထားသောနိုင်ငံတကာရာဇ ၀ တ်မှုအဖွဲ့" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်
သတင်းသည် WEB တစ်လျှောက်လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားသဖြင့်၎င်းသည်သတင်းဟောင်းဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်မဟုတ်ပါ၊ လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒီ virtual world တွင်တုံ့ပြန်မှုများကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤ virtual world ၌အသုံးပြုသူများသည်ဤလုပ်ရပ်၏အတိုင်းအတာကိုယခုအချိန်အထိမတွက်နိုင်သေးပါ မည်သည့်ဥပဒေကိုမချိုးဖောက်ပါ အချက်တစ်ခုကဆိုဒ်များကကြိုက်သည် peliculasyonkis.com, seriesyonkis.com, surfthechannel.com, taringa.net, thepiratecity.org နှင့် mulinks.com ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိုမီနိုအကျိုးသက်ရောက်မှု၏နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကျလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင်ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောမေးခွန်းကတတိယပါတီ၏အခွင့်အရေးများမည်သို့ဖြစ်သွားမည်နည်း။ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ န်ဆောင်ခပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်ခပေးတဲ့သူအားလုံးရဲ့ပိုက်ဆံဘာဖြစ်သွားမလဲ။ သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတယ်၊ တရားရုံးကိုသွားရမလား။ ယခုတိုင်အောင်မသိကြ။
အမှန်တရားကတော့ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့်တရား ၀ င်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ မတော်မတရားဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်သူဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ…ပထမလက်စားချေမှုလုပ်ရပ်များကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်ဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရေးဌာန (www.justice.gov) နှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ် universal (www.universalmusic.com) စုပေါင်းအားဖြင့် အမည်မထုတ်ဖေါ်သော.
ဖတ်ချင်သောသူတို့အဘို့, ဒီမှာပြောဆိုချက်ကို၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်: Megaupload အပေါ်စွဲချက်တင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Megaupload ပိတ်လိုက်တယ်
မက္ကဆီကိုသည် SOPA ကဲ့သို့ညစ်ညူးသောလမ်းတွင်ရှိနေသည် ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်သော xD ကျွန်ုပ်သည်ယခုလ ၂၄ ရက်မှ ၂၄ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ပြခန်းကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည်။ အကြောင်းမှာ dA သည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီး၊ megaupload ကဲ့သို့တရားမ ၀ င်သောအကြောင်းအရာအသွားအလာ ("fanart" သို့မဟုတ် "fanfiction") ရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ... တရားဝင်, ဒီဖန်တီးမှုစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးအစားအနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်တစ်ခုအနကျအဓိပ်ပါယျအလုပ်ဖန်တီးသို့မဟုတ်မနိုင်လျှင်ပထမ ဦး ဆုံးအဘယ်သူမျှမဘယ်တော့မှကတည်းကတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒါကြောင့်ငါအရမ်းစိတ်ပူမိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ "fanwork" (သို့) "fandom" ဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တယ်။
ငါဒီအခွင့်အလမ်းကိုယူ။ အကြွေစေ့၏အခြားဘက်ခြမ်း ... အားဖြင့်ဤနာရီအနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြလုပ်ရပ်များအကြောင်းပြောဆို အမည်မထုတ်ဖေါ်သော:
- အမေရိကန်တရားရေးဌာန (www.justice.gov)
- အမေရိကရှိရုပ်ရှင်များအသင်း (http://MPAA.ORG)
- အမေရိက၏အသံသွင်းစက်လုပ်ငန်းအသင်း (RIIA.ORG)
- Warner Music (wmg.com)
- FBI စာမျက်နှာ (fbi.gov) သည် ၇ မိနစ်ခန့်ကျသည်။ ... တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဖြစ်ပုံရသည်။
ဒါကဒီမှာအဆုံးသတ်မည်မဟုတ် ... surelyကန်အမှန်မဟုတ်။
ကျော်သူ (@anonopsOne) သေချာသည် - ကျွန်ုပ်တို့ကိုမျှော်လင့်ပါ။ #Megaupload
Megaupload ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီဆိုတာသိပြီးနောက်ချီလီမှာတွစ်တာမှာ Hashtag ပေါ်လာတယ်။ ဒီလိုဖတ်ပြတယ် - #JuntenPorno, hahahahahahahaha ကငါကိုရယ်နေတုန်းပဲ။
သူတို့ထဲကတချို့ကအခြားသူများကိုကြိုက်, နောက်တဖန်အွန်လိုင်းပြီးသားဖြစ်ကြသည် universal သူတို့ကသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်ကိုမရေးခင်မှာမှတ်စုတင်ဖို့ငါသံသယရှိတယ် -ငါနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်- သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန် ... ဒီကိစ္စကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။
ကျနော်တို့က dispassionath မြင်ရလျှင်ငါ၏အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ခံရပေမည် Megaupload ပါ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်သောထောင်ပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းများကိုလက်ခံခွင့်ပြုပါက၊ သူတို့အတွက်၎င်းသည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Megaupload ပါ သူတို့ကထိုအကြောင်းအရာကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲမျှဝေခဲ့ကြပြီးအများစုမှာအမြတ်အစွန်းမရရုံသာမကသူတို့၏လုပ်ငန်းများကို၎င်းတို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှပင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်မဖြစ်မနေရောင်ပြန်ဟပ်မှုအမှန်တကယ်၏ပိတ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် Megaupload ပါ ၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလား၊ တကယ်တမ်းပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့အတွက်အကျိုးရှိသဖြင့်ဥပဒေချိုးဖောက်ရန်ခွင့်ပြုထားသော site ကိုပိတ်ပစ်ခြင်းလော။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအဘယ်အရာကိုနားလည်သနည်း။ အဲဒါကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်လို့လုပ်တာလား၊ မှန်တာလုပ်လို့လား။ WEB သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဆိုဒ်ဖြစ်သင့်သလား။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းကိုမည်သို့ထိန်းညှိရမည်နည်း။
ငါဒီကိစ္စကိုမာနထောင်လွှားကျော်လွန်ပြီးကျော်လွန်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည် FBI က ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့်ရပ်ကွက်တစ်ခုပိတ်ခြင်း -အမည်မသိ- တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သေးသည့်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
ကိစ္စရပ်များသည်မလွယ်ကူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိလျှင် SOPA, Sinde ဖြစ်သော်လည်းလူများသည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုများကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်အချို့သောစည်းမျဉ်းများလိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ Lleras စသည်တို့သည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် Megaupload တွင်မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်သောဖိုင်များသာမက၎င်းတို့၏ backup များဖြစ်သောအသုံးပြုသူဖိုင်များနှင့်ထိုတွင်သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပါပါ ၀ င်သည်မှာမှန်ပါသည်။
ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် virtual pilot များ (ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ခိုက်နေသည့်လေယာဉ်ပျံတင်သရုပ်ပြခြင်းများကိုပျံသန်းသည်) ၏အသင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ Birefings နှင့် missions များကိုမျှဝေရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာ MU အတိအကျဖြစ်ပြီးယခုထိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ပရီမီယံအကောင့်အတွက်ငွေပေးချေသောသူများနှင့်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါမည်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရပ်မျိုးတွေကိုမလိုလားအပ်တဲ့လုပ်ရပ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ သာဓကတွေရှိရမယ်။
အမှန်မှာ၊ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်တတိယပါတီများ၏အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူ ၆၀၀၀ ကျော်သည်စာမျက်နှာ၏စာမျက်နှာကိုဖောက်ထွင်းရန်ညှိနှိုင်းလျှင် FBI က သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတရားရုံးမှာခုခံကာကွယ်ဖို့သင်လည်းအလားတူလုပ်လို့မရဘူးလား။
ဒီပြသနာကအရမ်းလေးနက်တယ်။ ငါ Backup မှာအများကြီး MU ကိုတင်ထားတယ်။ ယခုဖိုင်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်။ > _
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူငါကဲ့သို့သော anime ချစ်သူများအကြားတွင်အများအပြားရှိသည်ကိုငါသိ၏။ ရာနှင့်ချီသောစီးရီးများ၊ အထူးသဖြင့် "ဟောင်းနွမ်းသောမင်းသမီးများ" အားလုံးတွင် MU အတွက်သာအချိတ်အဆက်ရှိကြသည်။ "ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး".
ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ, ဒါပေမယ့်အလားတူခံစားချက်များကို ._ ။
ဟုတ်ကဲ့၊ အခြားဆိုဒ်များတွင် anime မရှိသလောက်ပင်
ကျွန်ုပ်သည် upload တင်ထားသော anime ၆၀ gigabytes နှင့်အလုပ် ၁၀ ခု gigabytes ပျောက်ဆုံးသွားပြီး၊ Catalan သို့မဟုတ် Italian မှအပိုင်းအစတစ်ခုသို့မဟုတ်စုံထောက် conan များကဲ့သို့သောစီးရီးများကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်ရမည်ကိုငါမသိတော့ဘဲ T_T ကိုထပ်မံတင်မည်ဆိုသောသံသယအဟောင်းများရှိသည်။ ဒါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုဒေါသထွက်စေတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကဒီနေရာမှာစပိန်လူမျိုးတွေရှိရင်ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသတင်းပေးပို့ဖို့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖန်တီးနေတယ်။
ကျုပ်တို့မှာ YouTube ကျန်သေးတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့သင်ဟာအီတလီနဲ့ကာတာလန်ကိုသိတယ်၊ ဒါကြောင့် Google မှာရှာမယ်ဆိုရင်သင်ရွေးချယ်စရာတွေပိုရလိမ့်မယ်။
ငါစပိန်အားလုံး, ငါတို့တရားရုံးသို့တိုင်ကြားချက်တစ်ခုလုပ်ဖို့စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသင့်တယ်, ငါဆိုသည်ကား, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သာလျှင်, ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောပိုက်ဆံအားလုံးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်, ရိုးရှင်းပါသည်
ကျွန်ုပ်နားမလည်သောအရာကားအဘယ်နည်း။ မည်သည့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများအရ၎င်းတို့ကိုထောင်ချမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့လက်အောက်ရှိ (မူပိုင်ခွင့်နှင့်ခိုးကူးမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများသည်နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားသည်) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားခံတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ကြဘူး၊ ငါဖတ်တာဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့အားလုံးမဟုတ်ဘူး။
အသေးစိတ်ကတော့ MU ဆာဗာတွေဟာအမေရိကန်မြေပေါ်မှာပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့လိုချင်တာကိုနည်းပညာအရလုပ်နိုင်တယ်
ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုကတော့ကုမ္ပဏီတွေဟာခိုးကူးခွေနဲ့ပိုက်ဆံမရှာကြဘူးလို့ဆိုတယ်။ လူအနည်းငယ်သာ play Station 2, mp3 player, 320 Gig hard drives များကိုဝယ်ယူကြလိမ့်မည်။ ပင်လယ်ဓားပြများအတွက်မဟုတ်လျှင်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုင်းအနည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်။ ငါကတရားမဝင်ဘူး၊ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာသိပေမယ့်ဆိုနီနဲ့တယ်လီဖုန်းလိုကုမ္ပဏီတွေကပင်လယ်ဓားပြတွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအကျိုးမပြုဘူးဆိုတဲ့အယူအဆကရယ်စရာကောင်းတယ်။
Mega Upload မှမည်သူ့ကိုမှ (တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) download လုပ်မထားဘူးလား။ ငါတစ်ခါတလေ, ဘယ်တော့မှလုံ့လရှိသူပေမယ့်ငါကပြုမိပါဘူး။
ငါထင်တာကတော့အင်တာနက်ခိုးကူးမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်သင့်တယ်ထင်တယ် - တိကျတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီး၊ တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်တယ်။ လင့်ခ်များကိုမျှဝေသူများသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ချသူများကိုဆန့်ကျင်။ မရသင့်ပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းသည်အစိုးရများအတွက်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ SOPA နှင့်အတူသဘောမတူဘူး။ ဒီဥပဒေအရဆိုသူတို့ကမည်သည့် site ကိုမဆိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ သူတို့ဟာပင်လယ်ဓားပြတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ်ဘလော့ဂ်ကိုပိတ်ပစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကမ္ဘာကိုထိန်းချုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်။
Mega Upload ပိတ်ခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Anonymous တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်။ မနေ့ကဆန္ဒပြမှုကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်။ Facebook နဲ့ Twitter တို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အကယ်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ကတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်ကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်။ လူအများက SOPA နှင့် PIPA ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောဖိုင်များ (အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်) ကို upload လုပ်ရန် megaupload တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်ဤအရာကိုတွေ့ပြီ။ ငါတို့ဘယ်ရောက်ကုန်မလဲမသိဘူး
ကျွန်တော် Megaupload အသုံးပြုသူမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီကနေကျွန်တော် download ဆွဲပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့သူတို့တွေဟာရုပ်ရှင်တွေ၊ တေးဂီတတွေနဲ့တခြားဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ အဓိကအချက်မှာတရားဝင်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ပိတ်ခြင်းသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများကမည်သို့မည်ပုံအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေသူ၏ Big Brother ကအရာရာကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်ဖော်ပြခဲ့သောကမ္ဘာကဲ့သို့သောကမ္ဘာဆီသို့ ဦး တည်သည့်သေးငယ်သောပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစည်းမျဉ်းသုံးခုအရသူတို့ဟာ Dropbox၊ အီးမေးလ်အကောင့်များ၊ တတိယပါတီများမှပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများတင်ထားသည့်ဘလော့ဂ်များနှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ကိုပိတ်ပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသေးအဖွဲကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးပင်လယ်ဓားပြများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ရိုးရှင်းသည့်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည် ထပ်မံ၍ ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူကရုပ်ရှင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ဝယ်ယူခြင်းကိုရပ်တန့်သွားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ နောက်မှ၊ သင်ကြိုက်လျှင်သင်၏ပိုက်ဆံထဲထည့်ပါ။ သို့မဟုတ်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းသည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသည်ဖြစ်စေမလုပ်ပါ။ ကုမ္ပဏီများသည်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ အရှုံးပေါ်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိတ်ပစ်ရန်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်အနည်းဆုံးတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ သင်၌မရှိသောအရာကိုသင်မည်သို့ဆုံးရှုံးနိုင်သနည်း အကယ်၍ Megaupload မတည်ရှိပါကဤသို့သောငွေပမာဏကိုကောက်ယူသွားမည်နည်း။
စားသုံးသူကိုညှစ်ရန်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေသောအစိုးရများနှင့်ကုမ္ပဏီများကအင်တာနက်သည်အလွန်အရေးကြီးသောစစ်မြေပြင်ဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ငါတရားမဝင်သောအလေ့အကျင့်ကိုခွင့်မပြုသင့်ကြောင်းငါနားလည်ပေမယ့်တရားဝင်နှင့်အဘယျသို့တရားမဝင်သောပါသလဲ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများသည်ဥပဒေကိုပုံသဏ္makeာန်နှင့်ပုံသဏ္ဌာန်တူအောင်ပြုလုပ်ပြီးသာမန်ပြည်သူများကိုအမြဲတမ်းခြယ်လှယ်နေပြီးထိခိုက်နစ်နာစေလျှင်၎င်းဥပဒေအားချမ်းသာသူများကိုဆင်းရဲသားများထံမှကာကွယ်ရန်စီမံထားသည့်အတိုင်းအတာအဖြစ်နားလည်နိုင်ပါသလား။
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသော - အဘိုးအဘွားများထက်အရည်အသွေးမြင့်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမို ရယူ၍ အသိဥာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပါပြီ။ ငါသူတို့လုပ်ပေးထက်ပိုပြီးလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဒါကငါ့ကိုပိုပြီးလွတ်လပ်စွာစဉ်းစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အများဆိုင်ဒိုမိန်းရှိစာအုပ်များသည်ကျွန်ုပ်၏ကျန်ရှိသောကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တစ်စုံတစ်ရာကိုမှီခိုစရာမလိုဘဲဖတ်ရန်ခွင့်ပြုသည် (အရည်အသွေးကောင်းသည့်စာပေများကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေသူများကရောင်းသောအရာမဟုတ်) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအခမဲ့နှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်အခမဲ့ရယူနိုင်ရန်တားမြစ်ထားသည်။ ။ ယခုနှင့်ငါ၏အသေခံအကြားပမာဏတိုးပွားလာနေသည်။
အဆိုးဆုံးကတော့လူတွေဟာအဲဒီအခွင့်အရေးကိုတောင်အသုံးမပြုကြတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရီမီယံအကောင့်များနှင့်ကြော်ငြာများကိုတိုက်ရိုက်အခြေခံပြီးဖြတ်တောက်နေတဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာ X စီးရီးကိုကြည့်ချင်တာကြောင့်စာရေးသူကိုငွေပြန်မပေးပဲဘာယဉ်ကျေးမှုကိုသူတို့မေ့နေတာလဲ။ နှင့်အခွင့်အရေး။ ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ သီအိုရီအရသူတို့သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်ကိုသူတို့မသိကြသလား။
အမြတ်အစွန်းရစေသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုပိတ်ခြင်းသည်တစ်ခုခုနှင့်ထပ်တူထပ်မျှလား။ တစ်ပြားမှမထည့်ဘဲနောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်စီးရီးကိုဘာမတွေ့ရတာလဲ။ ပထမ ဦး စွာကုမ္ပဏီတစ်ခုအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိသောလမ်းကြောင်းများထောင်ချီရှိသည် (torrents?) ဒုတိယအချက်ကတော့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါမြင်သောတစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာအကောင့်များရှိပြီးကိုယ်ပိုင်ဖိုင်များအတွက်အသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါသိသလောက်အတိုင်းသူတို့သည်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများရှိသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ဒါကဘာမှမဆိုလိုဘူး၊ တရားရုံးတခုခုရှိရင်လျော်ကြေးပေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်တရားမ ၀ င်သည်ဖြစ်စေတရားမဝင်ဖြစ်စေတရားသူကြီးသည်၎င်းကိုအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။
လုံးဝသဘောတူသည် လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်နီးပါးကရေးသားခဲ့သော (၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈) ရေးသားခဲ့သည့်အကြောင်းအရာကိုသင့်အားသင်ပြောပြချင်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အလွန်ဆင်တူပါသည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ Megaupload ပါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မလိုလားအပ်သော, ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများအပြန်အလှန်လမ်းကိုမှလွဲ။ အဆုံးသတ်:
ငါ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးစပိန်ဖိုရမ်ကိုဝင်တဲ့အခါ -ဘယ်နေရာ- ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုသူများသတိရသည် -ငါတို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ခေါ်ခဲ့တယ်၊- ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များကိုစာမျက်နှာများနှင့်စာမျက်နှာများဖြစ်ပေါ်စေသည့် beatle themes များနှင့်ကြာရှည်စွာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ မှန်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့သဘောတူခဲတာမှန်ပေမဲ့လည်းသင်ယူခဲ့မှာသေချာပါတယ်။
ကျနော်တို့ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေသခံများရှိခဲ့သည်နှင့်အချိန်ကနေစစ်တိုက်- bootlegs ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖိုရမ်ခွဲတစ်ခု၏တည်ရှိမှုကိုမည်သူမျှဂရုမစိုက်ကြပါ။ တကယ်တော့အဲဒီမှာမရှိခဲ့ပါ။
သေချာတာပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာများများစားစားမရှိခဲ့ဘူး၊ ရမှတ်အများဆုံးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ အများစုကမြေပြင်အနေအထားရှိသူတွေ၊ နိုင်ငံရေး, ဂီတသို့မဟုတ်အနုပညာဆွေးနွေးခြင်း၏အသိဉာဏ်နှင့်နိုင်စွမ်း။
ယနေ့ငါဖိုရမ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်အမှုအရာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ်။ "ဘာ Beatle ကအရှည်ဆုံးအာgrာတလဲ?" လိုရိုးရှင်းတဲ့၊ သို့မဟုတ် "မင်းက Ringo ရဲ့နှာခေါင်းကို sexy လို့ထင်လား" မဟုတ်ဘူး။ ငါအဲဒီအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ RapidShare၊ MegaUpLoad၊ YouSendIt... ထို့အပြင်ဤမျှလောက်များစွာသော, ဖိုရမ်များအလိုအလျောက် leechers hosted ပစ္စည်းကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာကြီးမားတဲ့ဂိုဒေါင်တစ်ခုမျိုးဖြစ်လာကြပါပြီ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပျင်းရိနေသော“ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များ” ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါက၎င်းတို့သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တန်ချိန်များစွာပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ဖိုရမ်တစ်ခုတိုးချဲ့ရန်ကူညီနေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤ "ပံ့ပိုးမှုများကို" အများစုသည်အခြားဖိုရမ်များသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များမှကူးယူခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းစွာကူးယူထားခြင်းတို့ကြောင့်မဟုတ်ပါက၎င်းသည်မမှားပါ။ ငါတို့၏ဗဟုသုတကြွယ်ဝစေရန်ထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ပံ့ပိုးရန်ပင်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိကြပါ။
ဒီနေ့ဖိုရမ်တစ်ခုမှာစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်၊ အများသုံးဒိုမိန်းတွင်ကူးယူကူးယူထားသောသတင်းများ၊ အကြောင်းအရာများသည်စကားလုံးနှစ်ဆယ်ထက်မပိုသော "အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း၊ မသိသေးသော" နှင့် "ဆွေးနွေးမှုများ" နှင့် "ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ" ဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသည်။ နှင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားရေးသားထားသောကြောက်မက်ဘွယ်သောစပိန်နှင့်အတူ။ စာလုံးရေ ၂၀ လောက်ရိုက်နေတယ်ဆိုရင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုသယ်ဆောင်သွားမှာပါ Golgotha.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုက်ညီသောအတွေးအခေါ်များကိုကြိုးဆွဲချနိုင်စွမ်းပျောက်ဆုံးသွားပြီလား၊ အဆိုးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေးအခေါ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းပျောက်ဆုံးသွားပြီလားဟုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ လေ့လာသင်ယူရန်အငတ်အဘယ်မှာရှိသနည်း
ထိုအမှတ်တမ်းအတွက်, အဝိဇ္ဇာတစ်မျှတမှုမဟုတ်ပါဘူး ... ငါလေ့လာနေသည့်အခါငါ့အစပိန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည် ဘယ်နေရာ နှင့်ဤကျေးဇူးတင်စကားကသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါနားမလည်တဲ့စကားလုံးများစွာနဲ့ဒီဖိုရမ်များကြောင့်ယနေ့ငါပြthatနာမရှိတော့ပါ။
ငါအဲဒီမှတ်ချက်နဲ့သဘောတူတယ် ခင်ဗျားတင်ထားတဲ့အကြံဥာဏ်တွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်အာရုံကိုနည်းနည်းလောက်ပေးမယ်၊ သတင်းနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုချုံပုတ်သွားပြီးပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မယ်။
ပြproblemနာကကျွန်တော်တို့ဟာ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့မှာအရည်အသွေးနဲ့အရည်အသွေးကိုဖလှယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အင်တာနက်ကိုပိုမိုဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ခြင်း (မကောင်းသောမဟုတ်သည့်) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူအများဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သော်လည်းဆူညံမှု၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမပြုလုပ်သောမူရင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ရှာဖွေရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ အရင်တစ်ခုခု
အင်တာနက်အမြန်နှုန်းနှင့် hard drive များ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပါလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အချက်အလက်များမှာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive ကိုဖြည့်ရန်၊ အချက်အလက်အမြောက်အများဖလှယ်ရန်၊ အဖွဲ့၏သီချင်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တေးဂီတစသည်တို့ကိုသိရှိရန်မသင့်တော့ပါ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကသင့်ရဲ့ hard drive ပေါ်မှာသီချင်းပေါင်း ၄၀,၀၀၀ ရှိခြင်း၊ စာမဖတ်ဘဲစာအုပ်တစ်ထောင်ကူးယူပြီး၊ သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်အမေရိကန်စီးရီးမြင်ကြပြီ။
ယဉ်ကျေးမှုကိုအလျင်အမြန်စားသုံးလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယင်းတို့ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အချိန်တိုတောင်းသည်။ ကျနော်တို့မုန့်စိမ်းအားဖြင့်သယ်ဆောင်နှင့်အလျင်အမြန်စားသုံးသောကြောင့်ကျနော်တို့ကဖျော်ရည်ဖို့အချိန်ခဲရှိပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေးချယ်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုမှာကျန်နေသေးတဲ့အကြွင်းအကျန်တွေဟာအရင်၊ နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့လောင်ကျွမ်းသောအရာ၏အရည်အသွေးပြောင်းလဲလာသည်ဟူသောအချက်အပြင်ကျော်သွားသောကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အနည်းငယ်သာသြဇာသက်ရောက်သောကြောင့်၎င်းသည်ပျော်စရာမျှသာဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်၊ လေ့လာရန်၊ အတွေ့အကြုံရရှိရန်စသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုပ်ထွေးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစဉ်းစားရမည့်၊
ငါဒီဂိမ်းထဲကို ၀ င်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါနောက်ဆုံးမှတ်စုတွေအထိ discs တွေကိုမဖွင့်ခင်။ အခုငါဂီတတွေအများကြီးသုံးစွဲပြီးအဲဒါကိုနည်းနည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်။
အရာအားလုံးအပြင်သတင်းအချက်အလက်သည်လတ်တလောတွင်ထင်မြင်ယူဆချက်များမှဝါး။ ကောင်းစွာနှိပ်စက်ခံရပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဂုရုပြောသော“ ငါဘာဂုရုမသိဘူး” ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရှိနေသောသူများသည်အခြားသူများကထုတ်ဝေသူသို့မဟုတ်အသံသွင်းကုမ္ပဏီမှပြောကြားသည်။ - ဒါဟာကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ်၊ ငါကောင်းတယ်၊ ဆိုးတာမှမစီးဘူးလို့ဒီကပြောပါတယ် ပြီးတော့ငါနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်မင်းဘာပြောနေတာလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလေ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမနှိပ်စက်တော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှိပ်စက်စရာဘာမှမရှိဘူး။ ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲလွယ်ကူသောသတင်းအချက်အလက်ကိုလိုချင်သည်။ အချိန်ဖြုန်းနေလျှင်၎င်းကိုစဉ်းစားခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုဖွင့်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် 3g ကိရိယာ၏ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို ဆက်၍ ဒေါင်းလုပ် ချ၍ ထိတော့မည်မဟုတ်ပါ။
@Tina နှင့် @algoban: အမှန်တရားနှင့်ကောင်းမွန်သောအသိမည်မျှပါသနည်း။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်မှတ်ချက်တွေပေးပြီးနောက်ကျွန်တော်ပြောတာကိုမင်းထက်ကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ 😀
ငါပြောတာတစ်ခုကငါပုဂ္ဂလိကခြေရာခံတွေ၊ leecher နဲ့ fansubero ဟောင်းတွေကိုတင်ပြီးငါ့အကြီးအကဲတွေကိုအကြီးအကျယ်လွှင့်ပစ်လိုက်တာပဲ၊ ငါ့နိုင်ငံရဲ့ anime လုပ်ငန်းရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုကငါတို့ကိုစီးပွားဖြစ်ဝက်သား anime သာဆောင်ကြဉ်းလာတဲ့အခါငါ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေအများကြီးကိုထိမိတယ်။ သူတို့ကစီးရီးအားလုံးကိုတရားဝင်စာတန်းထိုးရန်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပ်နှံသောနေ့၊ ထို့နောက်သူတို့ကတိုင်တန်းသည်၊ အကြောင်းအရာသည်လိုင်စင်မရှိသောကြောင့်ပင်ခိုးကူးမှုကိုဆွဲထုတ်ရန်ရှိသည်။
အကြောင်းအရာများကိုအခြေအနေမှဖယ်ထုတ်ရန်မဟုတ်ပါ။ ကျနော့်အမြင်အရကိုယ့်ကိုယ်ကိုစနစ်ကိုအခိုင်အမာဝေဖန်သူအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ "၁၉၈၄" ဟာအနာဂတ်ခြိမ်းခြောက်မှုမဟုတ်ပါ၊ အဂတိလိုက်စားမှုသတင်းများ၊ မီဒီယာများသည်အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီများ၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုခံရသည်။ ဖြန့်ဝေရာတွင်သတင်းအချက်အလက်ပိုများသည်။ သို့သော်မည်သည့်အရည်အသွေးရှိသနည်း။ ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်ခြယ်လှယ်? လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာလဲ ရှိသလား။
လူအများကြားမှာကိုယ့်လမ်းကိုယ်ရှာနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုငါမငြင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မီဒီယာရော၊ အစိုးရရောလုံးဝမိုက်မဲတဲ့အမြစ်တွယ်နေတဲ့နိုင်ငံသားကိုရှာဖို့မမှားဘူးလား။ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၊ သတင်းစာများမှသတင်းများသို့မဟုတ်အနာဂတ်မျိုးဆက်များပညာရေးအတွက်အမေရိကန်များကဂရုစိုက်မှုများကိုကြည့်ရှုရုံသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အဘိုးအဘွားတွေကငါလုပ်ခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ဝက်ကိုလက်မခံခဲ့ကြဘူး၊ ဒါပေမဲ့ပိုကြီးတဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာနေရတာကပိုပြီးကြီးမားတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမဖြစ်စေဘူး။
Megaupload ၏အသုံးအနှုန်းများကိုပုံကြီးချဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ပိတ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါငါအချို့လုပ်ရပ်များသည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုဟုခေါ်သည့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ သဘာဝတရားအရစာရေးဆရာများသည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုကိုခုခံကာကွယ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည့်ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာကိုပိတ်ထားခြင်းသည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးတော့မဟုတ်ပါ။ သင်ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေရန်နှင့်ထိုရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။
ငါအာရုံစူးစိုက်ချင်တာကအတိအကျပြofနာရဲ့ပုံစံနှင့်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ဥပဒေအရလူတစ် ဦး သည်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိလျှင်အပြစ်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်မည်မျှကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားပါစေ၊ ၎င်းတို့သည်အပြစ်ရှိသည်ဟုထင်မြင်ယူဆနေဆဲဖြစ်သည့်အတွက်ဤနေရာတွင်သူတို့ပိတ်လိုက်သည်။ တရားဝင်သုံးစွဲသူများ၊ သင်၏ဖိုင်များကိုလက်လှမ်းမမီနိုင်သည့်အပြင်သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကို FBI လက်ထဲတွင်မြင်ရလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်?
ပြီးတော့ဒီရာထူးတိုးမြှင့်ပေးတဲ့လူတွေ / ကုမ္ပဏီတွေအုပ်စုတွေရှိတယ်။ ထုတ်လုပ်သူများ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဝက် (ဘ်) စာမျက်နှာတစ်ခုကိုပိတ်ထားသော FBI စစ်ဆင်ရေး (သို့) ကျွန်ုပ်တို့သည် SOPA / PIPA / ACTA နှင့်အစားထိုးသူများအားအတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖို့အရှက်ကင်းမဲ့သောမျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကိုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုထက်ကျော်လွန်ပြီးငါယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသည့်ကြီးမားသောမီးခိုးမြောင်းများနှင့်၎င်းကိုအစွမ်းထက်သောသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ပို၍ အသုံးချသည်။
ဤအမှုအလုံးစုံကိုပြောပြီးမှ၊ ငါနှင့်သင်တို့၏ Tina ရှုထောင့်မှသင်၏ရှုမြင်ချက်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှဝေသည်ကိုငါပေါင်းလိုသည်။ သို့သော်ကျူးလွန်ခဲ့သောချိုးဖောက်မှုများမှာဖန်ခွက်ကိုဖြည့်နေသည်။ ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာ Megaupload ဟာထပ်မံကျဆင်းလာသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏လျှံကျခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤလောကရှိတစ်ခုခုကိုပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းမှာ snip ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းနည်းစေသည်။
သတင်းအချက်အလက်သည်သင်လိုချင်သောအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ကောင်းမကောင်းနှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်။ သင်ပင်သင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်။
အစိုးရတွေကဘာတွေရှာနေတာလဲမသိဘူး ကျွန်ုပ်သည်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပြီးကျွန်ုပ်တွင်စဉ်းစားရန်ကိရိယာများ၊ ကျွန်ုပ်ဘာကိုစဉ်းစားရမည်ကိုပြောကြားခြင်းမရှိဘဲမိမိကိုယ်ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကြောင်း၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုဆင်ဆာဖြတ်ရန်နှင့်၎င်းအားလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ (သိသာထင်ရှားစွာကျွန်ုပ်သည်များစွာသောအရာများ၏လွှမ်းမိုးမှုခံရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်) အကယ်၍ အခြားလူများကမပေးလျှင်အခွင့်အရေးရလျှင်သင်၏ပြproblemနာဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်များသည်၊ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်၎င်းကိုဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အတွေးထိန်းချုပ်ခြင်းဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သင့်အားသင့်လျော်သောအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမြဲတမ်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြားရွေးချယ်စရာများရှိနေသေးသည် (torrents) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သူတို့သည်အခြားသူများ၏အလုပ်မှအမြတ်အစွန်းရစေသောအမျိုးအစားတစ်ခု၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိတ်ထားကြသည်။
ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ပြunknownနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်မသိသောသူများစွာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ပုံနည်းလမ်းသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်းရှင်းနေပါသည်။ ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသောကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေများအဖြစ်။ သို့သော်၎င်းသည်လူများသည်ယနေ့အစိုးရများကိုဖြိုချနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်သင်ထင်သည်ထက်စွမ်းအားပိုရှိပြီးအသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိသည်။ အစိုးရမှဥပဒေတစ်ခုကိုခွင့်ပြုလျှင်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်သဘောမတူညီပါကအစိုးရကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အကယ်၍ မနက်ဖြန်၌လူအားလုံးသည်ဥပမာ - Universal ထုတ်လုပ်သည့်အရာကိုစားသုံးခြင်းကိုရပ်တန့်ပါကသူတို့၏အင်ပါယာသည်ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မည်။ လူတွေမလုပ်ရင်သူတို့သဘောမတူဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့လွတ်လပ်မှုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတာမဟုတ်ဘူး။ သင်တို့မူကားထိုသို့ပြုနိုင်သည်။
Algoban, မင်းရဲ့သဘောထားကိုချီးကျူးပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စဟာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းအမှန်မှာလူအများလက်လှမ်းမမီနိုင်သည့်အရာ - မသိဘဲ၊ လက်လှမ်းမမီမှုသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကြီးမားသောရေပေါ်အမှိုက်သရိုက်များကိုသတင်းသို့မဟုတ်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြပါ။
ငါသည်လည်းငါ၏နိဂုံးချုပ်ကောက်ယူပါတယ်, ငါ့ "အမှန်တရား" ယုံကြည်ပါတယ်နှင့်ငါ့ဘဝချဉ်းကပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ဆနျ့ကငျြဘ, ဒါပေမယ့်ငါမရေမတွက်နိုင်အောင်သတင်းအချက်အလက်ခြယ်လှယ်ရှိကွောငျးကိုငါသိမြင်ခြင်းနှင့်လူအများစွာသောသူတို့မပါဘဲဖတ်ပြီးသောအရာကိုယုံကြည်အထူးသဖြင့်ကတည်းက အနည်းဆုံးဆင်ခြင်ခြင်း။ ဤပြissuesနာများတွင်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များစွာပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်တရားသည်ရှည်လျားသောစစ်မှန်သောအချေအတင်ပြောဆိုမှုများအတွက်ပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။
"လှောင်အိမ်" အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်စကားပြောနည်းဖြစ်သည်။ ငါဒphilosophနကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီမှာကတိကျမှန်ကန်ဆုံးကတော့ပလေတိုဂူရဲ့ဒဏ္toာရီကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒါငါ့ထင်မြင်ချက်ပဲ၊ ဒါကမှန်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး
သိသာထင်ရှားတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်။ torrents တွေကိုငါပိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုမချိုးဖောက်ဘူး။ ကျွန်တော်နားလည်သည်မှာဤတိုက်ခိုက်မှုသည် SOPA နှင့်သက်ဆိုင်သောဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဟုဖြစ်သည်။ သတိပြုရမည်မှာ၊ ယခုအချိန်တွင် Megaupload နှင့်လူမှုရေးဖိအားများကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာ၏ရလဒ်ကြောင့်ငါအဆိုပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအာဏာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သင်၌ရှိကြောင်းမသိလျှင်ဘာလုပ်မလဲ။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပြည်သူလူထု၏နုတ်ထွက်ပြီးနစ်မြုပ်နေသောလေကြောင်း၊ အစိုးရပေါ်လစီများမလိုလားအပ်သောလက်ခံမှုကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုခုလုပ်မယ့်အစားသူတို့ဟာအိမ်မှာထိုင်ပြီးသူတို့ထဲကအများစုကိုပါ။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါကကျွန်တော့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကသူတို့ဘယ်လောက်ပဲလိုချင်နေပါစေဒီစနစ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်လို့ပါ။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည် siomes ဖြစ်ကြသည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမူပိုင်ခွင့်နှင့်မည်သည့်အရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပိတ်သိမ်းမှုသည်အလွန်နီးကပ်နေပြီ၊ များစွာသောသူတို့သည်လျစ်လျူရှုခြင်း၊ နားမလည်ခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်သို့ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါသိသောအရာတို့ကြောင့် Megaupload သည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရှက်တကွဲအကျိုးအမြတ်မှရရှိသောအကျိုးအမြတ် ပစ္စည်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစီးပွားဖြစ်ကုန်သွယ်မှုပြုခြင်းသည်အများအားဖြင့်အကာအကွယ်ပေးသည့်အရာများမရှိဘဲအများအားဖြင့်အကာအကွယ်ပေးထားသောအိမ်ရာများ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေနေသောသူတို့၏ဒါရိုက်တာများ၏ဝင်ငွေကိန်းဂဏန်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မလုံလောက်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၇၅ သန်းကျော်) သည်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းတို့သည်သူဌေးများဖြစ်လာသည်။
ဤအတိုင်းအတာဖြင့်အပြစ်မဲ့သူများကိုထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည်၊ သေချာသည်မှာ၎င်းတို့သည်ထိခိုက်နစ်နာသူများသည်အာဏာပိုင်များကိုလည်းတရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ FBI တွင်တာ ၀ န်အားလုံးကိုမထားပါ ၄ င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအစီအမံများမှ ၄ င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသူတို့မလုပ်ခဲ့ကြပါ၊ ကွန်ယက်ရှိဖိုင်များဒေါင်းလုပ်ဆွဲရာတွင်သြဇာအရှိဆုံးကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရေးပါမှုကိုပြသထားသည့်နေရာတွင်၎င်းတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် မူတည်၍ " တရားဝင် "အသုံးပြုသူများ။
ဤအကြောင်းကြောင့်, နောက်ကွယ်မှထူထောင်ခဲ့သောကြီးမားသောစီးပွားရေးကိုလက်မခံနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်များစွာသောမျှဝေခြင်းနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းထက် torrent မှတစ်ဆင့်မျှဝေသည်။ အဲဒီမှာလုပ်ခဲ့တာကဒေါင်းလုပ်ချတိုင်းအတွက်ကွန်ယက်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေပေးတဲ့အကာအကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ပဲ။ သူတို့စီးဆင်းမှုဟာသူတို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်၊ ပြီးတော့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအမြတ်အစွန်းနဲ့အမြတ်ရတယ်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုပြောတယ်၊ ဥပမာ Megavideo၊ မင်္ဂလာပွဲများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဗွီဒီယိုများကိုတင်ရန်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သလား။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မကြာသေးမီကအဆိုပြုထားသောအလွန်တင်းကျပ်သောပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည်အသင့်လျော်ဆုံးသို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်သည်ဖန်ထည်ပစ္စည်းများဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ခွာ။ ရဲရင့်သောနွားတစ်ကောင်ကဲ့သို့ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သေချာသည်။ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးနှင့်စာရေးသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများသည်ထိုကဲ့သို့သောပုံပျက်လမ်းဖြင့်ဆုံလျှင်။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်အကြောင်းကိုပင်ကျွန်ုပ်မပြောပါ။ အကြောင်းမှာလူအများက၎င်းကို "ငါလိုချင်သမျှလုပ်ခြင်း" "အရာရာတိုင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်" "အသိပညာတွင်ပိုင်ရှင်မရှိ" စသည်တို့ကိုရှုပ်ထွေး။ သစ်တော်သီးကိုကျောက်တုံးတစ်လုံးတည်းတွင်ကျောက်တုံးများဖြင့်နှိုးဆွပေးသည်။ ထိုအယူအဆကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ရှုံးနိမ့်သောတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ ထိုးနှက်မှုအတွက်စိတ်မကောင်းပေမယ့်ငါမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ခဲ့တာငါဥပဒေလေ့လာနေတာအတွက် ... လာပါ
သူတို့ဟာအကာအကွယ်မပေးဘဲတိုက်ရိုက်အကျိုးရခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ သို့သော်မတရားမှုကိုမထည့်ဘဲစဉ်းစားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ငါဂန္ထဝင်ဥပမာတစ်ခုနှင့်မျိုးကွဲနှစ်ခုကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။
1. သင်ဓားများ လုပ်၍ သူတို့ကိုရောင်းသည်။ သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုရည်ရွယ်ချက်မရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုပေးသည်
အမှု ၁ တွင်တရားမဝင်ပါ။ အမှု (၂) တွင်သင်သက်သေပြရန်လိုသည်။ သို့မဟုတ်ဓားပြုလုပ်သူသည်ကြံရာပါဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရမည်။ အတော်များများက megaupload ကို 1 မှာတွေ့မြင်ရပြီး၊
သို့သော်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားကြီးမားသောဆင်တူသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများမဟုတ်သည့်အဘယ်ကြောင့် megaupload နှင့်ဘာကြောင့်မတူသနည်း။
နှင့်အခြားမေးခွန်းတစ်ခု (သင်ဥပဒေလေ့လာကတည်းက) ။ တရားသူကြီးတစ် ဦး သည်စာမျက်နှာ၏တရားဝင်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည့်လက်ရှိစနစ်နှင့်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလား။ ဒီစနစ်မှာဘာမှားနေလဲ
၂။ ဓားတွေလုပ်ပြီးရောင်းလိုက်တယ် သိ ကြောင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။
သင်ချရေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကြံရာပါရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတမျှသာမဟုတ်သော်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်တားမြစ်ထားသောအလေ့အကျင့်များကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းကြောင့်အရာခပ်သိမ်းသည်ထင်ရှားသောပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Mega ဟာမင်းရဲ့ယူဆချက်ကိုဒုတိယနေရာမှာထားခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲဒီမှာထားရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ပဲ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့လက်တွေကိုဆေးကြောပြီးသုံးစွဲသူများကိုတာ ၀ န်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့ဟာဆက်လက်ဖုံးကွယ်နေတုန်းပဲ ။ အဘယ်ကြောင့်လူတိုင်းနှင့်အတူတူမပြုခဲ့သလဲ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းသည်၎င်းတို့အားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာများသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤကိစ္စများတွင်တရားရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏မေးခွန်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တရားသူကြီး၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုမီစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်၊ သို့မှသာသူသည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်၏တရားဝင်မှုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်၊ သူကရှေ့ ဦး စွာမှစ။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ ငါကောင်းမွန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအာမခံချက်တွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေ၊ ကာကွယ်ရေးအခွင့်အရေးစတာတွေကိုလေးစားပါတယ်။ (ဤအချက်သည် SOPA နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပွားများကိုဝေဖန်သောအတိအကျဖြစ်သည်။ သူတို့၏နည်းစနစ်များသည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်။ ) အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်တရားရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုသည်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်သည်။ တရားစီရင်ရေးကဏ္ first ကိုအမြဲတမ်း ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သင့်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားပြီးသုံးစွဲသူများ၏အာမခံချက်ကိုလေးစားခြင်းဖြစ်သည်။
Mega ကိစ္စတွင်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုသက်သက်မျှသာမဟုတ်ဘဲငွေကြေးခ ၀ ါချမှုအပါအ ၀ င်ပြစ်မှုထင်ရှားသူများကိုတရားစွဲဆိုထားခြင်းကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောအရာအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအမိန့်အဖြစ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကား၊ ငွေ၊ ဘဏ်အကောင့်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုလက်ခံထားသည့်ဆာဗာများကဲ့သို့သောစွပ်စွဲချက်အတွက်သက်သေသာဓကအဖြစ်။ ကိစ္စရပ်၏ရှုပ်ထွေးမှုက၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအပြည့်အ ၀ တန်ဖိုးပေးလျှင်၊ တရား ၀ င်ပစ္စည်းရှိသည့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်မှာဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယူအက်စ်တွင်ဥပဒေအရအရေးယူခြင်းသည်အလွန်စျေးကြီးပြီး၊ အများစုမှာတရားရုံးတွင်ကြားနာခြင်းခံရသည်သို့မဟုတ်တရားဝင်အသနားခံစာတွင်ပင်ကြားရကြသည်။
၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးသောအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်စရာမလိုပါ။ ချိုးဖောက်မှုများမရှိကြောင်းစစ်ဆေးရမည့်သူများသည် link များကိုရှုတ်ချပြောဆိုရန်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပ်နှံသူများမှာစာရေးသူများဖြစ်ပြီးကြီးမားသော upload ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အမြဲလိုက်နာသည်။ မသိသူနှင့်မသိသူများသည်ဂိမ်းအများစုမှာ blu rays စသည်တို့ကို fileserve သို့တင်ပြီး MU မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် fileserve သည်မကြာသေးမီကပေးဆောင်ခဲ့သည့်အချိန်နှင့်လျင်မြန်စွာမျှဝေခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ရာ mu uploaders အများစုသည်အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးမှုအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးသောဖြစ်ပျက်အဖြစ် MU ရဲ့ခံထိုက်သောမဟုတ်ကြောင်းတရားရုံးထပ်မံပြောလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်တယ်။ နောက်ဆုံးတွင် MU ကိုတည်ထောင်သူသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်နယူးဇီလန်နှင့်နီးစပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်အလွန်မိုက်မဲသည်။ သြစတြေးလျသို့မဟုတ်ဂျပန်တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်တူသည်။
အကယ်၍ သင်မမြင်တွေ့ခဲ့ပါက၊ အနည်းဆုံးပြောဖို့လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ပါတယ်။
စာမျက်နှာ ၃၀ မှစွပ်စွဲခံရသူများအကြားတွင်သီးသန့်အီးမေးလ်များကိုသင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည်ဖိုင်များအကြားမျှဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ် YouTube မှဖိုင်များကိုကူးယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြသည်။ သူတို့ဟာတောင်မှသူတို့ဟာပင်လယ်ဓားပြတွေမဟုတ်ပေမယ့်ပင်လယ်ဓားပြတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
SOPA ကဲ့သို့သော sinde နှင့်အခြားသူများသည်မမျှတသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ။ ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့်ယန္တရားများမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ကိုထိန်းချုပ်လိုသောကြောင့် sinde နှင့်အခြားသူများသည်မှားယွင်းသောအခြေစိုက်စခန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
MU အနေဖြင့်သူတို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုသိသောကြောင့်ကားကိုစစ်ဆေးပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် MU သည်သုံးစွဲသူများကိုငွေပေးချေသည်။ ၎င်းတို့သည်အကာအကွယ်ပစ္စည်းများအတွက်ပိုက်ဆံရရှိလျှင်ပြitနာဖြစ်နိုင်သည် (အကြောင်းမှာအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်မှတ်ချက်ထားပြီးဖြစ်သည်)၊
mu မှာသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ခဲ့တာကိုသူတို့သိခဲ့ကြပေမယ့်မလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ ဒါကလုံလောက်တယ်
နောက်တစ်နည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ၇၀% သောအင်တာနက်အသွားအလာကိုစပြီးဖွင့်ပြီးအမှားမလုပ်ပါနဲ့၊ ခိုးကူးမှုကြောင့်အင်တာနက်ဟာများပြားလာပါတယ်။
@ pandev92 @ MU သည်အကာအကွယ်ပေးထားသောပစ္စည်းများကိုကိုယ်တိုင်မတင်ပို့ခြင်းဟာသူ့ကိုအပြစ်ဖို့ရန်မလုံလောက်ပါ၊ အကြောင်းမှာအပြစ်ပေးနိုင်သောအပြုအမူ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုမျိုးကိုတိုက်ရိုက်၊ မသင့်လျော်သော၊ ချန်လှပ်ခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်၊ သင်ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျရှုမြင်ပါက၎င်းသည် MU ၏အပြုအမူနှင့်အတူပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးပြုသူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တွန့်ဆုတ်နေသောသဘောထားဖြစ်သည်။ ကအောက်မှာသွားလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် MU ၏စီးပွားရေးပုံစံနှင့်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတို့အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ algoban ပြောခဲ့သလို, Providence ကိုအလေးအနက်ဖတ်ပါ။
ခင်ဗျားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက်ထက်ဝက်ကျော်ကျော်ဟာငါထင်တဲ့အတွေးကိုပိတ်ပစ်ရလိမ့်မယ်၊ ဒါကမသင့်တော်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေထက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်အချို့သောသူများပင်လျှင်မည်မျှပေးဆပ်ရကြောင်း၊ အရှက်မရှိသောမည်သည့်ကျိုးနွံမှုမရှိဘဲရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါရစေ၊ ပြစ်ဒဏ်သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများမကျူးလွန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဂရုပြုရန်တောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်သင်မြင်သောအခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကလူတိုင်းကိုဓားပြမဖမ်းဘူးလို့ဆိုလိုတာလား ကောင်းပြီ၊ MU နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာ၎င်းတို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သူတို့၏အပြုအမူမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်သော၎င်း၏ကိုယ်ပွားအားလုံးအတွက်အရေးကြီးသောနိုးကြားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤပြproblemနာအားလုံး၏တစိတ်တပိုင်းမှာရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးသည်တရားမဝင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်အားအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကူးယူပြီးပါပြီ Megaupload ပါ ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားကနေ။
ငါဒီအားဖြင့်ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာလဲ ဤအပြုအမူသည် WEB တွင်လုံးဝ“ ပုံမှန်” ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်၊ အင်တာနက်သည်အကောက်ခွန်နှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရထိန်းချုပ်ထားပြီးတရားဥပဒေအရတရားဝင်မှုမရှိသောဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရအုပ်ချုပ်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ဤအလေ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးသောလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားအရည်အသွေးအပေါ်များစွာမူတည်သည်။
ဤအခြေအနေသည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်နည်းဖြင့်ဆန္ဒပြပွဲများကိုပိတ်ပစ်ကြောင်းစွပ်စွဲကာဖြစ်ပေါ်စေသည် Megaupload ပါ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကိုတိုက်ခိုက်သည်။ ဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်မှုကိုကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်းရဲ့အစ။
ဒါတကယ်လား? ဒီလုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်ထွက်သယ်ဆောင်ပါသလား FBI က အင်တာနက်ပေါ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်အဆုံးရဲ့အစကဘာလဲ။ လူသား၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုလူတိုင်းမရရှိနိုင်ဟုဆိုလိုပါသလော။
ငါတော့မထင်ဘူး။ အမှန်တရားကတော့ငါပိတ်လိုက်တာကိုမပျော်ဘူး Megaupload ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအမြောက်အများလိုပဲငါပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ငါ့မှာပရီမီယံအကောင့်ရှိတယ်- နှင့် 15Gb ထက် ပို၍ တင်ရန်အချိန်။ အချက်အလက် -အခြေခံအားဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းဖိုင်တွေ- သို့သော်ဆိုက်အတွက်တာဝန်ရှိသူများသည်တရားမ ၀ င်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းကြားစာအမြောက်အများကိုလက်ခံရရှိပြီးပြီဆိုတာကိုသိသောအခါငါဒေါသထွက်မိသည်။ Megaupload ပါ။ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုသူတို့သတိပေးခဲ့သလား။ သူတို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိတ်သိမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာသူတို့ ၀ ယ်ယူသူများနှင့်တရားဝင်အသုံးပြုသူများကိုသတိပေးခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ Megaupload ပါဒီဟာကတရားဝင်လား၊ မဟုတ်လား။
ဒါကငါတို့လိုချင်တဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်လား။ အခြားလူများမည်သို့ထင်မြင်ယူဆသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ အခမဲ့အင်တာနက်ဖြင့်လည်းငါတို့ဘာကိုနားလည်ကြတာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များကိုဖော်ပြနိုင်သည့်အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုလော။ ငါသိသလောက်အတိုင်း, ဒီဟာညစ်ပတ်စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပိတ်သိမ်းသည်သတင်းစာ site ကို။ ၏ဆိုဒ်များ Granma -http://www.granma.cu/- နှင့်ထံမှ အဆိုပါ Miami Herald -http://www.miamiherald.com/- လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်အယူအဆများဖြင့်သတင်းစာနှစ်စောင်ကိုအမည်ပေးရန်။ နိုင်ငံရေးကိုမဟုတ်ဘဲဥပဒေကြောင်းအရအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဆိုက်ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
၏ပိတ်သိမ်း Megaupload ပါ WEB မှတဆင့်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းအတွက်လွတ်လပ်မှုကိုခြိမ်းခြောက်နေပါသလား။ ငါတော့မထင်ဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုသည်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးပျော်စရာမှာအခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂီတအားလုံးသည်ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်၊ လွတ်လပ်သောယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်နေရကြောင်းကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုလိုက်သောမက်ဆေ့ခ်ျများအများစုမှာဆိုးဆိုးရွားရွားရေးသားထားသောကြောင့်စာလုံးပေါင်းအမှားများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ဘာသာစကားသည်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ရှစ်သို့မဟုတ်ကိုးနှစ်ခန့်စပိန်စကားပြောနှင့်ရေးသားခြင်း, ငါသဘောပေါက်သလား သွားကြရအောင်! ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါ။
ငါမပျော်ဘူး Megaupload ပါ ဒီဟာကိုပိတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ငါမယုံဘူး။
ဒါကငါတို့လိုချင်တဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်လား။ တခြားလူတွေဘယ်လိုထင်ကြလဲငါမသိဘူး။ အခမဲ့အင်တာနက်ဖြင့်လည်းငါတို့ဘာကိုနားလည်ကြတာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များကိုဖော်ပြနိုင်သည့်အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုလော။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုနေရာတိုင်း၌ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသည့်မှတ်ချက်များသည်“ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာ” နှင့်သင်မှတ်ချက်ပေးသည့်အရာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသောကြောင့်၎င်းသည်သဘောထားပြproblemနာဖြစ်ပြီးအလွန်လေးနက်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့်ဗဟုသုတဖြန့်ဝေခြင်းကိုရောထွေးနေသောအခြေခံပြproblemနာဖြစ်သည်။
"အရာအားလုံးကိုလုပ်ပါ" "အရာရာတိုင်းသည်အခမဲ့" "အသိပညာတွင်ပိုင်ရှင်မရှိ" နှင့်စသည်ဖြင့်။
ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်၊ Tina ။ သင်၏အချက်တစ်ချက်ကိုအတည်ပြုရန်အတွက် MU ၏သုံးစွဲသူများအပေါ်တာဝန်ယူမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခြေအနေများတွင်၊ Megaupload သည် ၀ န်ဆောင်မှုဆက်မပြတ်ဆက်နွယ်မှုကိုသက်ရောက်စေနိုင်သည့်တရား ၀ င်အချက်အလက်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုပျက်ကွက်လျှင်တာ ၀ န်အားလုံးမှပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သုံးစွဲသူများအားကုမ္ပဏီအားတရား ၀ င်အရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများမှသိရှိပြီးလက်ခံသောမွေးရာပါစွန့်စားရမှုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သတိပေးချက်များမပြုလုပ်ခဲ့ကြပါ၊ သူတို့၏သုံးစွဲသူများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပံ့ပိုးပေးသည့်သဘောထားလည်းမရှိကြပါ။
MU ၀ န်ဆောင်မှုအခြေအနေများကိုဖတ်ရန်မည်သူမဆိုစိတ်ဝင်စားပါကလူတိုင်းအတွက်ဒီလင့်ခ်ကိုကြည့်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တထောင် ရေနံချောင်း y အိုဆာကာ!
အခြားဥပဒေဆိုင်ရာကုစားနည်းများကိုမထိခိုက်စေပဲ Megaupload သည်ချက်ချင်းပင် (သို့မဟုတ်၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်း) ကိုချက်ချင်း (သို့) ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ (က) Megaupload သည်ဖောက်သည်သည်ဤသဘောတူညီချက် (သို့) ၎င်း၏ပေါ်လစီများနှင့်ဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်မကိုက်ညီပြုမူသည်ဟုယုံကြည်သည်။ (ခ) Megaupload ကြောင့်သုံးစွဲသူသည်အခကြေးငွေများသို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေခြင်းများကိုမပြုလုပ်ရ။ (ဂ) Megaupload သည်သုံးစွဲသူမှပေးသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှအတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းမပြုနိုင်။ (d) ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်လိုင်း၊ အခြား Megaupload ဖောက်သည်များ၊ သို့မဟုတ် Megaupload အတွက်တရားဝင်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု Megaupload ယုံကြည်သည်။
အထူးသဖြင့်ဤအပိုဒ်တွင်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းဖြစ်ရပ်များတွင် MU ၏သဘောတူစာချုပ်ကိုတစ်ဖက်သတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများ၏အခွင့်အရေးကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်အတွက်၎င်း၏ပုဒ်မ ()) တွင် MU သည်အသုံးပြုသူများအပြုအမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောတရားစွဲဆိုမှုများကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ၀ င်ရောက်ကာကွယ်ရန်နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းလျှောက်ထားရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဒါကမင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုဆန့်ကျင်လိမ့်မယ်။ MU သည်၎င်း၏ငွေပေးချေမှုကိုအသုံးပြုသူများအားဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်အကြွေးရစေသောကိရိယာများဖြစ်သော်လည်းစာချုပ်ထဲတွင်စာလုံးသေနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါသည်လည်းယခုနားလည်သဘောပေါက်မှုအောက်တွင်အတူတူပင်နားလည်သည် Megaupload ပါ ဤအပိုဒ်၏ယူဆချက်များအရဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသူတို့၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
နားလည်မှုနှင့်အတူဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၏ပိတ်ပွဲ Megaupload ပါ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်တိုင်နှင့်၎င်း၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသဘောသဘာဝကြောင့်မဟုတ်သောအကြောင်းတရားများကြောင့်မဟုတ်ပါ။
ပြနာက ... ဘယ်မှာလဲ၊ ။ သူတို့က MU, FBI ကတောင်းဆိုလိမ့်မည်နည်း
တစ်နည်းပြောရလျှင် MU သည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တောင်းဆိုခြင်းခံရလျှင် (အခြေခံအကျဆုံးနှင့်ယုတ္တိကျသောအရာဖြစ်သည်) ၎င်းနောက်ကွယ်မှဗျူရိုကရေစီသည်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဒီအခြေအနေတွေမှာတရားဝင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့မထင်ဘူး၊ သူတို့ကသူတို့ကိုပြန်ပေးရမယ်၊ ပေးရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုး။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မသိဘူး၊ ယူအက်စ်အေ အစိုးရရှေ့နေတစ် ဦး အနေဖြင့်တာဝန်ရှိသူများကိုယူဆောင်လာနိုင်သည် Megaupload ပါ တရားရုံးသို့ ... မေးခွန်းကဖြစ်နိုင်လျှင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားထိခိုက်နစ်နာမှုသဘောတူလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တရားမ ၀ င်တဲ့အမှုအခင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်တော့်နိုင်ငံမှာတရားစွဲမှုကိစ္စဟာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပါပဲ
အဆိုပါပြောဆိုချက်သည် MU ကိုဆန့်ကျင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအားနည်းချက်များစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်တူညီသောစာချုပ်တွင်ရည်ညွှန်းထားသည်။ ၎င်းတွင် MU သည် ၀ န်ဆောင်မှုမှပေါ်ပေါက်လာသောတာ ၀ န်များအားလုံးမှလွတ်မြောက်ပြီး၊ တရား ၀ င်အရေးယူမှုမရှိကြောင်း“ လျော်ကြေး”၊ “ အာမခံချက်မရှိ”၊ “ တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်ခြင်း” အပိုင်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ကိန်းဂဏန်း 12.2; ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကလက်ခံပြီးပေးသွင်းသည့်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေဆက်လက်ရှင်သန်နေသောပြofနာများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်တာ ၀ န်ယူမှုကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားသည်။ ထို့အပြင်၊ "အများအပြား" အပိုင်းတွင်ပcanိပက္ခကြားနာနိုင်သူ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အရည်အချင်းသည် (ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအမေရိကန်တရားရုံးတစ်ခုအတွက်) အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အဲဒါကိုအစပြုသောအချက်အလက်များ။
အသုံးပြုသူအားလက်နက်မချန် ထား၍ ၎င်းအတွက်အသုံးမပြုနိုင်သောစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းကြောင့်စာချုပ်၏ပျက်ပြယ်မှုကိုတောင်းဆိုခြင်းကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သောအချက်များပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက်တိုက်ရိုက်လျော်ကြေးပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည် ကန်ထရိုက်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် MU ၏အမူအကျင့်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပျက်ကွက်။ ပြနာမှာထိုကဲ့သို့သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုတရားစွဲဆိုခြင်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်လျှင်ပင်သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးစျေးကြီးသည်။ ထို့နောက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သလားသို့မဟုတ်စုဆောင်းထားသည့်ပစ္စည်းများ၏တရားဝင်မှုကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အရည်အချင်းကိုပေးသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်မပေးသောအချက်အလက်အကြားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရလျှင်စောင့်ဆိုင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်အပျက်ကို ဦး ဆောင်တရားရုံးမှကျလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ၎င်းယူဆချက်နှစ်ခုကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်သည်အက်ဖ်ဘီအိုင်ကိုအချို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအစပြုနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ သို့သော်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုစစ်ဆေး။ တရားခွင်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသည်။
Valve သည် Linux ဆော့ဝဲလ်အင်ဂျင်နီယာအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။